Xeer Ilaaliyaha Guud: Ilaa 30 garsoore ayaa Golaha Adeega Garsoorku ku magacaabay sharaci darro * Mareeg.com somalia, World News and Opinion.
Xeer Ilaaliyaha Guud: Ilaa 30 garsoore ayaa Golaha Adeega Garsoorku ku magacaabay sharaci darro
By A warsame	 Last updated Oct 21, 2014
Mareeg.com: Xeer ilaaliyaha Qaranka, Axmed Cali Daahir ayaa shaaciyey iney jiraan Garsooraytaal badan oo ka shaqeeya maxkamadaha gobolka Banaadir, kuwaasoo aan heysan wax shrciyad ah.
Axmed Cali Daahir oo la warbaahinta ayaa sheegay iney sharcidaro ay yihiin ku dhawaad 30-garsoorayaal oo ka shaqeeya Maxkamadaha Gobolka Banaadir iyo degmooyin kala duwan.
Axmed Cali Daahir ayaa sheegay in wax looga xumaado ay tahay in garsoorayaasha hada shaqeeya badankooda ay yihiin kuwa aan sharci aheyn, maadaama qofka garsoore noqonaayo laga rabo in Digreeto madaxweyne uu ku magacaawnaado, balse inta badan garoorayaasha hada jooga ay soo magacaabeen Golaha Adeega Garsoorka dalka ee uu madax u yahay gudoomiyaha Maxkamada Sarre Ceydiid C/llaahi Ilka-xnaf, sida uu yiri.
Wuxuu ku hanjabay Axmed Xeer Ilaaliyaha Guud Axmed Cali Daahir in lala xisaabtami doono garsoorayaasha hadda shaqeeya ee aan ku shaqeyn qaabka sharciga ah, maadaama ay ridaan xukuno, dad badan awoodda ka qaadeen, iyagoo aan sharci aheyn, sida uu yiri Axmed Cali Daahir.
Muranka u dhaxeeya Gudoomiyaha Maxkamadda Sare Avv. Ilka-xnaf iyo Xeer Ilaaliyaha Guud ee Qaranka Axmed Cali Daahir ayaa soo if baxay kabi markii Xeer Ilaaliyuhu amray in dhaqan geliyo Sharciga cusub ee Golaha Adeega Garsoorka, kaasoo isbaldel lagu sameeyey, arrintaas oo Ilka-xanaf diidan yahay.
“Xeer Ilaalintu ma aqbali doonto in sharci dalka loo soo saaray miiska hoostiisa la dhigto, waana in la dhaqangeliyo Sharciga cusub ee Golaha Adeega Garsoorka ee baarlamaanku ansixiyey, haddii kale waa leysla xisaabtami doonaa” ayuu yiri Axmed Cali Daahir 17-kii bishaan October.
Ilka-xanaf oo u jawaabaya Axmed Cali Daahir ayaa shalay oo aheyd 19-ka October 2014 yiri “Ninka sheeganaya xeer ilaaliyaha Qaranka ayaa yiri ma jiro golaha adeegga garsoorka, taasi waxaanan u maleynaynaa inay jaahilnimo badani ku jirto, waayo nidaamka dastuuriga ah ee dowladda ma ogola wax la yiraahdo jago bannaan”.
“Dastuurka dalka u yaalla jago la yiraahdo Xeer-ilaaliye oo howlo gaar ah qaabilsan nooguma jirto, balse sharciyadii ka horreysay way noogu jirtay… marka haddii la doonayo in la bedelo xeer-ilaaliyihii sharciyadii hore; waxay ahayd in si sharci ah loo bedelo, taasoo ah inuu bedelo golaha gaarsoorka. Nin sheegan kara Xeer-ilaaliye oo aanu ansixin golaha adeegga garsoorku waxba kama jiraan. Xeer ilaaliyuhuna wuxuu ka tirsan yahay maxkamadda sare, sida loo magacaabayana waxay ku taallaa qodobbada 15-aad iyo 18-aad ee xeerka garsoorka. Haddii la doonayo in xeer ilaaliye la magacaabo waa inay golaha garsoorku magacaabaan una gudbiyaan madaxweynaha si uu wareegto sharci ah ugu soo saaro,” ayuu yiri Ilka-xanaf